हुलाकी राजमार्गसहित विभिन्न परियोजनामा ११ अर्ब रुपैयाँ अपुग – Himalitimes
२०७८ जेष्ठ ४ ०५:५३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । गतवर्षजस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को निर्माण सिजनमै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उच्च संक्रमण र निषेधाज्ञाका कारण पूर्वाधार निर्माण सुस्त भएको छ । यसले पूँजीगत खर्च पनि कम हुने देखिएको छ । तर, सडक विभागका विभिन्न परियोजनाहरू कोभिडबाट मात्रै नभई बजेट पनि अपुग हुँदा थप प्रभावित हुन थालेका छन् ।
चालू आवको १० महीना अर्थात् वैशाखसम्म जम्मा ४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको सडक विभागसँग अहिले हुलाकी राजमार्गसहित, औद्योगिक कोरिडोर, स्थानीय पुललगायत विभिन्न शीर्षकका परियोजनाका लागि बजेट नै छैन ।
विभागका सहायक प्रवक्ता रमेशकुमार सिंहले कोभिडका साथसाथै बजेट पनि कम हुँदा पूँजीगत खर्च कम भएको जानकारी दिए । ‘हुलाकी राजमार्गमा काम अघि बढाउन बजेट अपुग छ,’ सिंहले भने, ‘६ लेनका विभिन्न औद्योगिक कोरिडोरहरूमा बजेटकै अभाव छ ।’
यी परियोजनासहित अन्य शीर्षकमा गरी कुल रू. ११ अर्बजति बजेट अभाव रहेको उनले बताए । ‘यसमध्ये रू. २ अर्ब ५० करोड विभागले आफै व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘जस्तै कतिपय खर्च नहुने शीर्षकमा रहेको बजेटलाई तानेर रकम अभाव भएका परियोजनामा खर्च गरिनेछ । तर, बाँकी रकम मन्त्रालयस्तरबाट निकासा हुनुपर्छ ।’ कोरोना भाइरसका कारण वार्षिक लक्ष्य पनि प्रभावित हुने विभागको भनाइ छ ।
चालू आवमा रू. १ खर्ब ८ अर्ब १६ करोड बजेट पाएको विभागले दोस्रो चौमासिकसम्ममा रू. ३० अर्ब १७ करोड ६४ लाख खर्च गरेको छ । उक्त अवधिसम्ममा विभागले वार्षिक लक्ष्य १ हजार ८०० किलोमिटर (किमी) नयाँ कालोपत्र स्तरको सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यस अवधिसम्ममा ८५० किमी मात्रै कालोपत्रमा स्तरोन्नति गर्न सकेको छ ।
यसमा ५५० किमी नयाँ कालोपत्र सडक थप भएको हो भने बाँकी ३०० किमी भने पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गरिएको हो । २८४ किमी नयाँ ट्र्याक निर्माण गरिएको छ । दोस्रो चौमासिकसम्म आउँदा नयाँ ट्र्याकसहित ग्रावेल बाटो ५०४ किमी तयार भएको छ । ग्रावेल स्तरको सडक १ हजार किमी बनाउने लक्ष्य छ ।
३०० सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा यो अवधिसम्म १२९ ओटा पुल मात्रै बनेका छन् । यसमध्ये स्थानीय सडक पुलअन्तर्गत ८६ र रणनीतिक महत्त्वका सडकमा ४३ पुल निर्माण भएका छन् । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सहयोगी हातहरुद्वारा आर्थिक सहयोग